Ayax sababay in "garoon ku yaalla Itoobiya ay diyaarad ku digi waydo" - BBC News Somali
Ayax sababay in "garoon ku yaalla Itoobiya ay diyaarad ku digi waydo"
Image caption East Africa Waxaa hadda duullaan ku haya ayaxii ugu badnaa muddo 25 sano ah
Ayax aad u badan ayaa diyaarad rakaab ku qasbay in ay qadka bedelato sida maamulka diyaaradaha ee Itoobiye uu sheegay.
Diyaaradda oo ka soo kacday Jabuuti ayaa dooneysay in ay ku degto garoonka magaalada Dirir Dhaba, xilligaas oo duuliyayaasha ay arkeen ayax koronkoro ah oo ku dhacaya matoorka diyaaradda, gaar ahaan qeybta marwaxadaha iyo afka hore.
Waxay isku deyeen in ay ku nadiifiyaan marwaxadaha ay diyaaradda ku duuleyso si uu u kala cararo.
Diyaaradda waxay u jiheysatay dhanka Addis Ababa oo ay ku degtay, sida wararka ay sheegayaan.
Bariga Afrika waxaa hadda weerar adag ku haya ayax duullaan ah oo ah midkii ugu badnaa muddo 25 sano ah, kaas oo dhibaato ba'an ku haya dalaga beeraha.
Ayaxa waxaa suuragal ah inuu hal mar ku dego 1km oo isku wareeg ah, isagoo boqollaal nooc ah. Qiyaas ahaan, 1km oo isku wareeg ahba waxaa ku dega ugu yaraan hal milyan oo ayax ah, sida ay sheegtay hay'adda Qaramada midoobeey u qaabilsan Beeraha (FAO).
Waxaa jiro bogag sheegaya in waxa Dirir Dhaba lagu arkay aysan ayax ahayn. Warbaahinta Aeronews Global, waxay baahisay sawirka afka hore ee diyaaradda oo uu biixiyay ayax dhintay.
Ka gudub Facebook daabacaad W.Q Aeronews
Dhammaadka Facebook daabacaadda qore Aeronews
Diyaaraddan Itoobiya laga leeyahay waxay ahayd duullimaad hal saac ah. Markii ay ku dhowaatay garoonka Dirir Dhaba, waxay wajahday ayax yaryar, balse markii ay xoogaa sii socotay waxay la kulantay kuwo waaweyn oo xitaa duuliyayaasha ku qasbay in ay waxba arki waayaan.
Afhayeen u hadlay shirkadda diyaaradaha wuxuu sheegay in duullimaadkaas loo weeciyay dhanka Addis Ababa, ka dib weerarkaas ayaxa lagala kulmay.
Ayaxan ku raagay Bariga Afrika waxaa la aaminsan yahay in Bishii August uu ka soo bilowday Yaman, halkaas oo dalladii uu ka baabi'iyay.
Gobolka Amxaarada ee Itoobiya, qaar ka mid ah beeraleyda waxay sheegeen in boqolkiiba 100% dalagii beeraha uu baaba'ay., sida Qaramada midoobeey ay xaqiijisay.